नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : छबिलाल अपराधहरुका नायक र जनताका खलनायक हुन, नौटँकी हुन, हामीलाई कुनै भ्रम छैन !
छबिलाल अपराधहरुका नायक र जनताका खलनायक हुन, नौटँकी हुन, हामीलाई कुनै भ्रम छैन !
"पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मेवारी म लिन्छु" भनेछन छबिलालले । त्यति मात्र होइन प्रहरी मारेको पुस्टि भएपछि अदालतले नै ज्यानमारा भनी फैसला गरेर जेल पठाएका रेशम चौधरी छुटाउने घोषणा पनि गरेछन उनले । आफैले अपराध स्वीकार्दा पनि कार्यकारी अध्यक्ष भैरहने र प्रहरीहरुको स्कर्टिङ्गमा भिआइपी बनेर हालिमुहाली गरिरहेको देख्दा लाग्यो - म, हामी सबै "जिउँदा मुर्दा" हरु रहेछौँ । यदी हामी जिउँदा भएका भए केही बोल्थ्यौँ, गर्थ्यौं । यस्तै यस्तै परिबेशहरु देखे पछि लेखेको हुँं मैले - कबिता सँग्रह - "देश हराएको मान्छे" र "मुर्दाहरुको बस्ती" भनेर भनिरहनु पनि परेन व्यबहार मै देखिए पछि । यस्ता खलनायकलाई पार्टीको अध्यक्ष र नेता मान्न तपाईंलाई छुट छ तर यिनी बिशुद्ध अपराधहरुका नायक र जनताका खलनायक हुन, नौटँकी हुन, हामीलाई कुनै भ्रम छैन । - रामप्रसाद खनाल